Yenza Ikamelo Lamafu Ukujonga Izaziso
Nangona ungeke uyibone, imisebe yangasemva ijikeleze. Imithombo yendalo (kunye neyingozi) iquka imisebe ye-cosmic , ukubola kwe-radioactive ukusuka kwizinto ezinqabeni, kunye nokubola kwe-radioactive kwizinto eziphilayo. Igumbi lefu liyinkqubo elula esivumela ukuba sibone ukuhamba kweemitha zelanga. Ngamanye amagama, ivumela ukubonwa ngokungaqhelekanga kwemitha. Esi sixhobo saziwa ngokuba yiWilson egumbini eliphezulu, ngokuhlonipha umvelisi walo, isazi sefilosofi saseScotland uCharles Thomson Rees Wilson.
Izinto ezifunyenweyo ezenziwe ngegumbi lefu kunye nesinye isixhobo esichazwe ngokuba yi-bubble chamber kukhokelela ekufumaneni kwe -positron ngowe-1932, ukufunyanwa kwe-muon ngowe-1936, kunye no-1947 ukufumana i-kaon.
Indlela iSebenzi leMigodi eliSebenza ngayo
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamagumbi efu. Ikamelo lefu lokusabalalisa i- cloud is the easiest to build. Ngokwenene, ifowuni inomxholo ogqityiweyo owenziwe ufudumele phezulu kwaye ubanda ngezantsi. Ifu ngaphakathi kwitshini yenziwe ngomphunga wotywala (umzekelo, i-methanol, i-isopropyl alcohol). Inxalenye esemnandi yekamelo igcoba utywala. Umphunga uphupha njengoko uwela kwaye uxolela kwiqondo elibandayo. Umthamo phakathi kwephezulu nakwinqanaba lifu le- vaper supersaturated . Xa i-particle eqhutywe ngamandla ( i-radiation ) idlula ngepompo, ishiya indlela ye-ionization. Iimodyuli zamanzi kunye namanzi empompo zi-polar , ngoko ziyakhangwa kwiinqununu ezi-ionized.
Ngenxa yokuba umphunga uphezulu, xa iamolekyu zisondela ngakumbi, zixhomekeke kumaconsi amathayo awela ngasezantsi kwisitya. Umzila wendlela ulandelelwa kwimvelaphi yomthombo wemitha.
Yenza i-Homemade Cloud Chamber
Kufuneka izinto ezimbalwa kuphela ezifunekayo ekwakheni igumbi lefu:
Sula iglasi okanye isitya seplastiki esinesiqhekeza
99% Isopropyl yotywala
Ikhonkco ekhutshwayo (umz., Iphoyisa elipholile)
Isitya esikhulu samanzi afudumeleyo
Isitya esinobungakanani sinokuba yinkunzi enkulu yebhanti. I-Isopropyl yotywala ifumaneka kwii-pharmacy ezininzi njengokuxubha utywala . Qinisekisa ukuba i-99% yotywala. I-Methanol iphinde isebenze kule projekthi, kodwa ininzi inetyhefu. Izinto ezixubayo zingaba yi-spong or piece of feelings. I-flashlight ye-LED isebenza kakuhle kule projekthi, kodwa ungasebenzisa i-flashlight kwi-smartphone yakho. Uyakufuna nokuba ifowuni yakho ivumeleke ukuba ithathe imifanekiso yamathrekhi kwigumbi lefu.
Qala ngokufaka intonga yesiponji kwisitya sezantsi. Ufuna i-snug ifanelekile ukuze ingayi kuwela xa ibhokhwe iguqulwa kamva. Ukuba kuyimfuneko, into encane yobumba okanye i-gum inokunceda ukunamathela kwisiponji kwisitya. Gwema i-tape okanye i-glue, ekubeni utywala unokuyichitha.
Sika iphepha elimnyama ukumboza ngaphakathi kwesiqhekeza. Iphepha elimnyama liphelisa ukucamngca kwaye lincinci. Ukuba iphepha alihlali kwindawo xa isiqhekeza sitywinwe, sinamathele kwisiqhekeza usebenzisa udongwe okanye i-gum. Beka isicatshulwa esiphezulu sephepha ngoku.
Phala i-isopropyl yotywala kwisitya ukwenzela ukuba isiponji sigcwele ngokupheleleyo, kodwa akukho mveliso engaphezulu. Indlela elula yokwenza oku kukukwongeza utywala kude kubekho utywala uze uthule ukugqithisa.
Gcoba isiqwenga sebhotile.
Kwigumbi elinokuthi lenziwe mnyama (umzekelo, i-closet okanye igumbi lokuhlambela ngaphandle kweefestile), uthele iqhwa elomileyo libe lipholile. Vula ingcambu phantsi kwaye uyibeke phantsi kwiqhwa elomileyo. Nika ingqungquthela malunga nemizuzu eyi-10 ukukhupha.
Beka isidlo esincinci samanzi afudumele phezulu kwendlu yefu (ngaphantsi kwebhotile). Amanzi afudumele atywala utywala ukuze enze ifu lomphunga.
Ekugqibeleni, cima zonke izibane. Khanyisa i-flashlight ngapha kwekamelo lefu. Wena ubona amathrekhi abonakalayo efwini njengezaziso ezibonisa i-radiation kwaye ushiya ibhotile.
Nangona i-isopropyl yotywala ikhuselekile kune-methanol, isasetyha xa uyayiphuza kwaye inokutsha kakhulu. Yigcine kude nomthombo wokushisa okanye umlilo ovulekileyo.
Iqhwa elomileyo libanda ngokwaneleyo ukuze kubangele i-frostbite. Kufuneka iphathwe ngokusebenzisa iiglavu . Kwakhona, ungagcini iqhwa elomileyo kwisitya esitywinwe, njengoko ukwakhiwa kwengcinezelo njengoko i-sublimates eqinile kwi-gas ingabangela ukuqhuma.
Ukuba unomthombo omsakazo, yibeke eduze kwendlu yefu kwaye ubone umphumo wokwanda kwemisebe. Ezinye izixhobo zansuku zonke zi-radioactive , ezifana neentsimbi zebrazil, iibhanana, i-litter i-litter kunye ne-glasseline.
Igumbi lefu linikeza ithuba elihle lokuvavanya iindlela zokukhusela imitha. Beka izinto ezahlukeneyo phakathi komthombo wakho omsakazo kunye negumbi lefu. Imizekelo ingabandakanya i-baggie yamanzi, isiqwenga samaphepha, isandla sakho kunye neshidi lesinyithi. Yiyiphi eyona nto ibhetele ekukhuselaneni nemitha?
Zama ukusebenzisa inkundla yamagnetic kwigumbi lefu. Iinqununu ezichanekileyo ezintle ezimbi ziza kujika kwiindlela ezichaseneyo ekuphenduleni kwintsimi.
I-Cloud Chamber ne-Bubble Chamber
Ikamelo lombhobho lenye inhlobo yomtshini we-radiation ngokusekelwe kumgaqo ofanayo kunye negumbi lefu. Ukwahlukana kukuba amagumbi okubhobhoza asetyenziselwa amanzi amaninzi kunomphunga we-supersaturated. Igumbi lebhola lenziwe ngokugcwalisa isilinda kunye nomlambo ngaphezu kwendawo yayo yokubilisa. I-liquide eqhelekileyo i-hydrogen ekhoyo. Ngokuqhelekileyo, insimu yamagneti isetyenziswe eklasini ukuze i-radiation ionising ihambe ngendlela ehambayo ngokuhambelana nesantya sayo kunye nomlinganiselo wokuhlawula. Amagumbi e-Bubble angaba mkhulu kunamagumbi efu kwaye angasetyenziselwa ukulandelela iindidi ezinamandla.
Indlela yokwenza i-Gel Air Fresheners
Ngaba izikolo ezizimeleyo zifuna ukuvunyelwa?
UMBC GPA, SAT kunye ne-ACT Data